Umthandazo wabantwana abanemvukelo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Umthandazo wabantwana abanemvukelo
Ingcamango yenkolo yomthandazo yinkqubo apho umntu adibanisa khona nobungcwele, ingcwele, into ethile ebizwa ngokuba ingcwele okanye nayiphi na inkolo. Inkqubo ye- umthandazo wabantwana abanemvukelo kuyasebenza ukubuza intlalontle yomntwana oziphethe kakubi.
1 Oomama kunye nomthandazo wabantwana abanemvukelo
2 Yintoni isivakalisi?
3 Umzekelo womthandazo wabantwana abanemvukelo
4 Kuyimfuneko ukumamela nokuthetha
Oomama kunye nomthandazo wabantwana abanemvukelo
Kuthiwa akukho nto yomelele kuyo el mundo ngaphezu kothando lukamama, umfazi ozisa ihlabathi ebomini kunye nomsebenzi wakhe ongapheliyo wokukhathalela umntwana wakhe. Uninzi loomama kwihlabathi liphela baya emithandazweni okanye kwimithandazo yokucela impilo-ntle, ubulungisa kunye nokuchuma kwezona zinto zixabisekileyo kubo.
Kwezinye iimeko zobomi, inyani yokuba abantwana bafumana utshintsho olunokuchaphazela indlela abaziphethe ngayo, isimo sabo sengqondo kunye neemvakalelo ayinakulawuleka. Oku kunokufunyanwa kwizinto ezinje, iingxaki, ukufikisa okanye ukungabikho kukamama okanye utata.
Olu tshintsho lunokubonakala kwimvukelo nokungathobeli. Ngamanye amaxesha ukuthandaza kuba yenye indlela yokuthethelela kwezi ngxaki. Olona khetho lufanelekileyo yi ukuthandazela abantwana abavukeli.
Amandla loo nto inikwe ukholo ku umthandazo wabantwana abanemvukeloKuxhomekeke ekubeni umntu owenza lo mthandazo unokholo olungakanani na. Ukuba nokholo kukuqiniseka, kukuqiniseka ukuba into engabonakaliyo ikhona. Kule meko, ukuba nokholo emthandazweni kukuba nokholo lokuba umntu ekubhekiswa kuye uya kuwuva aze awufezekise umthandazo owufunayo.
Ukholo lunokuba sisixhobo esinamandla ukuba sisetyenziswe ngendlela elungileyo, engenabugovu nangaphezulu kwayo yonke indlela ethobekileyo. Kufuneka iqatshelwe ukuba ukholo ayisiyiyo kuphela isixhobo senkolo umntu anokuba nayo; ngokwenza ungabona utshintsho.
Umthandazo lixesha lokholo apho umntu ozinikeleyo aphakamisa amandla akhe okwenza umnxeba kwiziko afuna ukunxibelelana nalo. Kukwaziwa nangokuthi ngumthandazo.
Umthandazo uyahluka ngokwendlela owenziwa ngayo, kukho imithandazo eyenziwa ngomlomo, imithandazo yengqondo, imithandazo yokucamngca, imithandazo yokucamngca, imithandazo yezikhalazo, imithandazo yokucela uncedo, ukuthandaza, imithandazo ebhaliweyo, imithandazo yencoko, phakathi kwabanye. Kufuneka kuqatshelwe ukuba, ngaphandle kweendlela ezahlukeneyo zokuthandaza, akukho mfuneko yokuba zenziwe ngokwahlukeneyo, zinokwenziwa ngendlela umntu anqwenela ngayo.
Ngokwesiqhelo ukuthandaza, abantu bathabatha ukuma okufana nokuvula iingalo, ukubeka izandla kunye nokujonga esibhakabhakeni, kodwa oku kuxhomekeke ekubeni ngubani owenza lo mthandazo kuba uyahluka ngokweemvakalelo zabo, bacinga ukuba bafanele benze njani.
Umthandazo ukwahluka ngokuxhomekeke kwinjongo yawo ethile, ngesiqhelo kwimithandazo uxolelo lucelwa iimpazamo, ngenxa yobuninzi bempilo, impumelelo kunye nokuba sempilweni. Unokuba nomdla Umthandazo womama ongasekhoyo.
Umzekelo womthandazo wabantwana abanemvukelo
Bawo waseZulwini ngalo mzuzu ndithatha lonke igunya njengo (tata okanye umama) wonyana wam (Igama lomntwana, okanye umntu omncinci) kwaye ndiyamngcwalisela wena mnumzana, ukuze wenze inguqu kuye, ndiyazi ukuba Izono zibangele ukuvukela konyana wam, kodwa ngoku ngamandla egazi lakho ndiyaxela ukuba wonke umoya wemvukelo ubotshiwe, awunamandla, awunanto, egameni lakho, nkosi, wenze sonke isono esibangele ubugwenxa, ekuziphatheni konyana wam.
Bawo waseZulwini ngegama likaYesu ndiyabhengeza ukuba imvukelo kunyana wam ngoku iyaphuma, lonke ulwakhiwo olwenziweyo kuye ngoku luqala ukutshatyalaliswa ngamandla egazi lakho, kwaye ndiyabhengeza ukuba ngoku ukhululekile, ndiyabhengeza Nkosi ukuba ngoku isekiwe emakhayeni okukhanya, aqala ukuguqulwa ngamandla obuqaqawuli bakho, ukuba uyilo lwantlandlolo luqale ukuzinza ebomini bakhe, ndimbhengeza njengonyana wozuko, unyana othobelayo, unyana ubukrelekrele bobukumkani, unyana ohloniphayo abasemagunyeni, ndiyabhengeza ukuba utshintsho Bazakuduma kakubi, baqonde nyana, mhlekazi, baqale ukuzalisa intliziyo yakhe ngobumnandi, ululamo, kwaye kwanga umoya oyingcwele ungamkhokela, uThixo uphawula amanyathelo akhe ukukhanya, umkhokele kumendo wenjongo yakho.
Mnumzana, ndiyaxela ukuba lo mthandazo wabantwana ondinike phantsi kolawulo lwam wenziwe ngokwelizwi lakho, ngokwentliziyo yakho nangengcinga zakho, ngalo mzuzu uyajoyina kwaye ufike kwitrone enamandla onobabalo lwakho. Bawo ndiyabulela kuwe ukuba uthumele impendulo kwangoko ivela ezulwini, ngalo mzuzu egameni lakho Nkosi uYesu ndenza ukuba ubuqaqawuli bukaThixo bube bumnandi ebantwaneni bam. Ndibhengeza inkosi ukuba naphina apho baya khona bathobela isimemo sokuthobela.
Ndifumana igunya njengomama okanye lotata lokuncothula nokutshabalalisa yonke into ebikhulelwe njengecebo likasathana ngokuchasene nabantwana bam.
Ngoku zenziwe zatywina, phantsi komnqophiso wokuba ngabantwana emva kwentliziyo yakho. Enkosi mnumzana, kuba kwangaphambili ndiyithatha njengengenamsebenzi. ngenxa yokuba umkhulu kwaye namandla akho angaphezulu kwawo onke amandla.
Egameni likaYesu, amen.
Kuyimfuneko ukumamela nokuthetha
Kufuneka kuqatshelwe ukuba, nangona umthandazo wabantwana abanemvukelo inokunceda, kufuneka ukuba ungahlali apho kuphela, kodwa ukhuthaze nengxoxo ukuze ikwazi ukufumanisa ingxaki enokubangelwa yimvukelo. Ukuqonda kunye nokugweba kubalulekile ekudaleni uzinzo oluzinzileyo kwaye ke ukonyusa ukuthembana okuvumela ukuqonda ngokukhululekileyo.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba naye wayesemncinci kwaye izinto anokuba uhlangabezana nazo unyana zikwayinto efanayo awayenokuzifumana kumava akhe. Ke ngoko, kuya kufuneka uqonde ukuba yinxalenye yokukhula kwaye uhlala ubakhona njengenkxaso ukuze ukwazi ukukhokela umntwana xa eyidinga, kodwa akakwazi ukucela uncedo.
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba umthandazo unokwenziwa ukusuka kwingcinga yomntu, olu iya kuba luhlobo lomthandazo owenzelwe wena. Kukho inkululeko epheleleyo kuba iyincoko phakathi komntu noThixo.
IRosari kwiNkosi yeNceba
Ukuthandaza iRosari eNgcwele ngoLwesithathu